महिलावादीहरू, मलाई माफ गर्नुस् ! - Khula Patra
प्रकाशित समय: २१:३२:५६
– पवित्रा घिमिरे,
अलि अघि एक नायिकाले आफूमाथि एक पुराना नायकले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइन्।
यो विषयले धेरै ठूलो रूप लिएको थियो र मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ।
यो प्रकरणले चलचित्र क्षेत्र मात्र तातेन, महिलावादीहरूका लागि ‘हट एण्ड ह्यापेनिङ’ टपिक बन्यो।
मलाई यो तर्क निकै विरोधाभासपूर्ण लाग्छ। करिअर ठूलो हो कि जीवन ?
के करियर बिग्रिन्छ भनेर हिंसा सहेर बस्न सकिन्छ त ?
करिअरमाथि उठाउने नाममा हेपिएर, दबिएर, हिंसा सहेर बस्नु चाहिँ ठीक हो त ?
यही कमजोरी थाहा पाएर पुरूषले महिलालाई हेपेको हुन् कि ?
यदि आफूमाथि कुनै पनि हिसाबले अन्याय भएको छ भने ठाउँको ठाउँ आवाज उठाउन किन सकिँदैन ?
र कारबाहीको माग किन गर्न सकिँदैन ?
अन्याय सहनु पनि एक किसिमको अपराध होइन र ?
समय परिवर्तनसँगै महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तरमा धेरै परिवर्तन आएको छ।
धेरै हदसम्म महिलाहरू बाहिर निस्किन पाएका छन्। स्वतन्त्र भएका छन्। उच्च शिक्षा आर्जन गर्न सकेका छन्।
झन्–झन् महिलाहरू पीडित भएको, दबिएको, हेपिएको कुराहरू किन आइरहेका छन् ?
केही महिना अगाडि नेपाली चलचित्रका नायिका तथा कलाकारले अन्तर्वार्ता दिने क्रममा बोल्न नजान्दा, सामान्य ज्ञान सम्बन्धी प्रश्नको सही उत्तर दिन नसक्दा निकै ट्रोल भएका थिए।
महिला समानताका कुराहरू धेरै उठ्ने गर्दछन् नेपालमा। धेरै एनजिओ, आइएनजिओ खुलेका छन्। महिलाको उद्दार तथा हक–हितको संरक्षणको लागि।
विदेशीहरू आउँछन् नेपालमा रिसर्च गर्न भनेर। नेपालको दुर्गम जिल्लामा पुग्छन्। डाटा संकलन गर्छन्। त्यही डाटा लिएर आफ्नो देश पुग्छन् र नेपालमा यस्तो छ, त्यस्तो छ भनेर सुनाउँछन् र यसैबाट पैसा कमाउँछन्।
नेपालमा राष्ट्रपति महिला, सभामुख महिला, केही पदमा मन्त्री पनि महिला, सांसदमा थुप्रै महिला छन्।
मात्र महिलाहरूलाई मौका दिएको छ भन्ने देखाउनको लागि त्यो गरिएको पाइन्छ। महिला राष्ट्रपति, मन्त्री, सांसद जे भएता पनि विकट ठाउँका महिलाहरू जहाँको त्यही छन्। उनीहरूको आवाज सधैं दबिएको छ।
त्यसैले महिलालाई पद दिनुभन्दा पहिले उनीहरूको क्षमता विकास गर्नु महत्वपूर्ण छ।
कतिपय अवस्थामा महिलाहरू पुरूषबाट पीडित नभएर महिलाबाटै बढी पीडित हुन्छन्। घर–पारिवारका महिलाले आफैं नियम बनाएर यो गर्न हुन्छ त्यो गर्न हुँदैन भनेर बन्धनमा बाँध्छन्।
कुनै महिलामाथि पुग्दा अर्को महिलाले आरिस गर्नु, घरको काममा महिलाले महिलालाई दलाउनु, बन्धनमा बाँधेर राख्नु, महिलाले महिलाको कुरा काट्नु यी सब व्यवहार पनि हिंसा नै होइन र ?
कुनै महिलाको विवाह ढिलो भयो भने कुरा काट्ने महिला नै हुन्छन्। विवाहपछि यदि कुनै महिला आफ्नै जन्मघर बसिन् भने महिलाले नै बढी हेप्ने गर्छन्।
बुहारी भएपछि यस्तो गर्नुपर्छ, त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर नियम लगाएर ‘तल्लो’ स्तरको व्यवहार गर्ने महिला नै हुन्छन्। तर महिलाबाट महिला पीडित भएका समाचार भने कमै आउने गर्छन्।
अपराधीलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ, महिला होस् वा पुरूष।
पैसा, पहुँच र शक्तिको आधारमा किन मुद्दालाई हेरफेर गर्नु अपराध हो। नारीवादको बकम्फुसे भाषण, गालीगलौज र यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर बहस गर्नुको साटो यथार्थको धरातलमा उभिएर, समस्याको जड पत्ता लगाएर समस्याको समाधान गर्ने कि ?
जबसम्म महिलाहरू घरदेखि सुरक्षित हुँदैनन्, आत्मनिर्भर हुँदैनन्, शिक्षित हुँदैनन्, आफ्नो निर्णय आफ्नै लिन सक्दैनन्, तबसम्म जे–जे नियम कानुन बनाए पनि महिलाको स्थिति यस्तै रहन्छ।